သွားတိုက်ဆေးရဲ့  ဒီလိုအသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုသင်သိပြီးပြီလား? – Trend.com.mm
သွားတိုက်ဆေးရဲ့  ဒီလိုအသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုသင်သိပြီးပြီလား?
Posted on December 29, 2017 by Noel
နေ့စဉ်လူနေမှုဘ၀မှာအသုံးပြုနေကြတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာသွားတိုက်ဆေးက သင့်အတွက် အများကြီးအသုံးဝင်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာသိပါသလား?သွားတိုက်ဆေးဟာသွားတွေကို သန့်စင်ပေးနိုင်ရုံသာမက တခြားနေရာတွေမှာလည်းသုံးလို့ရပါသေးတယ်။ ဘယ်နေရာတွေမှာလဲဆိုတော့
အိမ်တွင်းသဘာဝဆေးတစ်ခုအဖြစ် ၀က်ခြံထွက်တဲ့အခါဝက်ခြံဖုလေးပေါ်သွားတိုက်ဆေး အနည်းငယ်အုံထားလေ့ရှိပါတယ်။ညမအိပ်ခင်သွားတိုက်ဆေးလေးနည်းနည်းအုံပေးထားပြီး မနက်မိုးလင်းကြည့်လိုက်ရင်ဝက်ခြံဖုချပ်ရပ်သွားတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ချည်သား၊ချည်ထည်အကျီတွေမှာနှုတ်ခမ်းနီတွေစွန်းထင်းတဲ့အခါ အလွယ်တကူဖျက်နိုင်ဖို့အတွက် သွားတိုက်ဆေးအနည်းငယ်ကို အစွန်းကွက်ပေါ်မှာပွတ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ရေအနည်းငယ်နဲ့ ဆေးကြောလိုက်ပါ။နှုတ်ခမ်းနီပျက်သွားတဲ့အထိလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အချိန်တွေအကြာကြီးသုံးလာတဲ့မီးပူရဲ့မျက်နှာပြင်မှာ အနည်းငယ်တေ့ာညစ်ပတ်နေ တာတွေရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ ပြောင်လက်သွားစေဖို့သွားတိုက်ဆေးအနည်းငယ်ပဲလိုပါတယ်။ သွားတိုက်ဆေးအနည်းငယ်နဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပွတ်တိုက်ပါ။တောက်ပြောင်သွားတဲ့အခါမှာရေနဲ့သေချာသန့်စင်ပေးပါ။
ငွေထည်ပစ္စည်းလက်စွပ်၊ဆွဲကြိုးတွေအရောင်မှိန်နေတဲ့အခါ အရေးပေါ်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် သွားတိုက်ဆေးကိုသုံးလေ့ရှိပါတယ်။သွားတိုက်ဆေးအနည်းငယ်ကိုသွားတိုက်တံအဟောင်းမှာထည့်ပြီးလက်စွပ်၊ဆွဲကြိုးကိုပွတ်တိုက်ပေးပါ။ခဏကြာလို့ရေနဲ့သန့်စင်ပြီးတဲ့အခါမှာ အ၀တ်စနဲ့သွားတိုက်ဆေးတွေမကျန်အောင်ပွတ်တိုက်ပေးပါ။
အရေးတကြီးစာဖတ်စရာရှိပါတယ်ဆို မျက်မှန်ကအရောင်မထွက်၊ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့အခါ သွားတိုက်ဆေးကိုသတိရလိုက်ပါ။သွားတိုက်ဆေးအနည်းငယ်နဲ့မျက်မှန်ကြည်လင်တောက်ပ သွားအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။
နံရံပေါ်မှာကလေးတွေဆော့ထားလို့ဖြစ်စေ၊မတော်တဆပေပွသွားတာဖြစ်စေ နံရံကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆေးပြန်သုတ်စရာမလိုပါဘူး။သွားတိုက်ဆေး အနည်းငယ်နဲ့ပွတ်တိုက်ပေးပြီးရေနဲ့သန့်စင်အောင်ဆေးကြောလိုက်ရုံပါပဲ။
ကြက်သွန်နီ၊ကြက်သွန်ဖြူကိုင်မိလို့လက်မှာအနံ့စွဲနေရင်သွားတိုက်ဆေးအနည်းငယ်ကိုယူပြီး လက်မှာပွတ်ပါ။ပြီးရင်ရေဆေးပြီးဆပ်ပြာနဲ့တစ်ခေါက်ထပ်ပွတ်ပေးပါ။ဆပ်ပြာနဲ့သန့်စင်ပြီးရင်တော့ ရေနဲ့သေချာသန့်စင်လို့ရပါပြီ။
မီးဖိုချောင်နဲ့ရေချိုးခန်းကြွေပြား၊နံရံတွေအရောင်မထွက်တော့လို့စိတ်မညစ်ပါနဲ့။သွားတိုက်ဆေးအနည်းငယ်ကို ခြောက်သွေ့တဲ့အ၀တ်စမှာထည့်ပြီးပွတ် တိုက်ပါ။ပြီးရင်ရေစိုအ၀တ် နဲ့ပြန်ပြီးသန့်စင်ပေးပါ။
ဒုတိယရင်သွေးလေးမွေးဖွားခါနီးပြီလို့ ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချော Jun Ji Hyun
ယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်တဲ့အခါ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ